စမောလေးနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်နေတဲ့အချိန် မယားကြီးလိုက်လာလို့ ခွေးပြေးဝက်ပြေး ပြေးခဲ့ရတဲ့ သတို့သား - HARTHANANTAW
စမောလေးနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်နေတဲ့အချိန် မယားကြီးလိုက်လာလို့ ခွေးပြေးဝက်ပြေး ပြေးခဲ့ရတဲ့ သတို့သား
International News March 19, 2020 No Comment
အသက် ၃၀ ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသား ဆစ်ဒီ ဆိုတဲ့ သူဟာ နောက်ထပ် ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ မင်္ဂလာဆောင်နေတုန်း မယားကြီးရောက်လာပြီး သူလူပျိုမဟုတ်ကြောင်း ပြောပြခဲ့ပြီးနောက်မှာ ဒေါသထွက်နေတဲ့ လူအုပ်ကြီးက ဝိုင်းလိုက်လို့ သတို့သားလောင်းတစ်ယောက် ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ် … ။
ဆစ်ဒီ ဟာ မယားကြီးနဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရှိပေမဲ့ အခုမင်္ဂလာဆောင်မတိုင်ခင်လဲ နောက်မိန်းမတစ်ယောက် ထပ်ယူထားသူပါ … ။
ဆရာသမား အပြေးမမြန်တဲ့အတွက် လူအုပ်ကြီးရဲ့ တွန်းထိုးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အင်္ကျီရော၊ ဘောင်းဘီပါ စုတ်ပြဲခဲ့ပြီး အညိုအမဲစွဲအောင် ထိုးကြိတ်ခံခဲ့ရတဲ့နောက်မှာတော့ ဘတ်စ်ကားအောက်မှာ ဝပ်တွားပြီး ပုန်းအောင်းခဲ့ပါတယ် …. ။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာ မယားပြိုင်ယူတာ တရားဝင်ခွင်ပြုထားပြီး ယောကျာ်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဇနီးမယား လေးယောက်အထိ ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်အိမ်ထောင်ပြုချင်ရင် မယားကြီးတွေရဲ့ သဘောတူညီမှု ရယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ် …. ။
ထိုသူကတော့ မယားကြီးရဲ့ သဘောတူညီချက် မယူခဲ့ပါဘူး။ စမော်လေးနဲ့ မင်္ဂလာဆောင် အခမ်းအနားကို မယားကြီးရောက်လာပြီး ဖြစ်ကြောင်းအကုန် ပြောပြတော့မှ ဇနီးလောင်းနဲ့ သူ့မိသားစုတွေက အကြောင်းစုံ သိခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ် …. ။
Writer : HULK (XYZ News)
စမောလေးနဲ့ မင်ျဂလာဆောငျနတေဲ့အခြိနျ မယားကွီးလိုကျလာလို့ ခှေးပွေးဝကျပွေး ပွေးခဲ့ရတဲ့ သတို့သား
အသကျ ၃၀ ဝနျးကငျြရှိတဲ့ ပါကစ်စတနျနိုငျငံသား ဆဈဒီ ဆိုတဲ့ သူဟာ နောကျထပျ ကောငျမလေးတဈယောကျနဲ့ မင်ျဂလာဆောငျနတေုနျး မယားကွီးရောကျလာပွီး သူလူပြိုမဟုတျကွောငျး ပွောပွခဲ့ပွီးနောကျမှာ ဒေါသထှကျနတေဲ့ လူအုပျကွီးက ဝိုငျးလိုကျလို့ သတို့သားလောငျးတဈယောကျ ထှကျပွေးခဲ့ရပါတယျ … ။
ဆဈဒီ ဟာ မယားကွီးနဲ့ ကလေးတဈယောကျရှိပမေဲ့ အခုမင်ျဂလာဆောငျမတိုငျခငျလဲ နောကျမိနျးမတဈယောကျ ထပျယူထားသူပါ … ။
ဆရာသမား အပွေးမမွနျတဲ့အတှကျ လူအုပျကွီးရဲ့ တှနျးထိုးတိုကျခိုကျမှုကွောငျ့ အင်ျကြီရော၊ ဘောငျးဘီပါ စုတျပွဲခဲ့ပွီး အညိုအမဲစှဲအောငျ ထိုးကွိတျခံခဲ့ရတဲ့နောကျမှာတော့ ဘတျဈကားအောကျမှာ ဝပျတှားပွီး ပုနျးအောငျးခဲ့ပါတယျ …. ။
ပါကစ်စတနျနိုငျငံမှာ မယားပွိုငျယူတာ တရားဝငျခှငျပွုထားပွီး ယောကျြားတဈယောကျအနနေဲ့ ဇနီးမယား လေးယောကျအထိ ယူနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ နောကျအိမျထောငျပွုခငျြရငျ မယားကွီးတှရေဲ့ သဘောတူညီမှု ရယူဖို့ လိုအပျပါတယျ …. ။
ထိုသူကတော့ မယားကွီးရဲ့ သဘောတူညီခကျြ မယူခဲ့ပါဘူး။ စမျောလေးနဲ့ မင်ျဂလာဆောငျ အခမျးအနားကို မယားကွီးရောကျလာပွီး ဖွဈကွောငျးအကုနျ ပွောပွတော့မှ ဇနီးလောငျးနဲ့ သူ့မိသားစုတှကေ အကွောငျးစုံ သိခဲ့ရတာပဲဖွဈပါတယျ …. ။
လင်မသိအောင် ခိုးစားကာမှ ပြန်နုတ်မရ၍ အရှက်ကွဲခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီး(ရုပ်သံ)
လင်ငယ်နဲ့အတူ လင်ယောက်ျားမောင်းတဲ့တက္ကဆီကိုစီးဖို့ ငှားမိတဲ့ အမျိုးသမီး
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာအသုံးပြုနေတဲ့ သဘာဝနည်းဖြင့် ကာမအားတိုးအောင်လုပ်ဆောင်နည်းများ
Categories Select Category Astrology (2) Digital Camera Reviews (7) Funny (3) Health (9) International News (13) Knowledge (10) Local News (16) Photography (11) Relationship (1) Up to date (3)